Latest DigitalTimes News!
40. တစ်ခါအား အပြည့်သွင်းထားရင် တစ်လလောက် အသုံးခံတဲ့ စမတ်နာရီ	-DigitalTimes
#NEWS	(07h ago)
39. ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးပေးချင်တဲ့ Gadgets များ	-DigitalTimes
#FEATURES	(09h ago)
ဖွင့်ရန်။ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှုဘ၀ကို အထောက်အကူ ပြုပေးတဲ့ Gadgets များစွာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပေါ်ထွက်လာကြပါပြီ။ Gadgets for this week ကဏ္ဍမှာ ဒီတစ်ပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး Gadgets များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ iPhone 8 Plus Leather Wallet Case သူဟာ အရည်အသွေးမြင့် သားရေဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ iPhone 8 Case ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းက ခန့်ညား သပ်ရပ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက သူ့ကို ပိုက်ဆံအိတ်လိုပါ သုံးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်များ ထည့်သွားဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်များ ထည့်ထားပေမယ့် ကေ့စ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို မထိခိုက်စေဘဲ အတွဲအစပ်မိနေတာက အရမ်း လန်းပါတယ်။ ဒီကေ့စ်နဲ့ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ […]
38. iPhone X ကို အားသွင်းရင် ၂ ဆ ပိုမြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?	-DigitalTimes
#FEATURES	(11h ago)
ဖွင့်ရန်။ iPhone X ကို လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၅၀ တန် 29-watt Power Adapter နဲ့ ၂၅ ဒေါ်လာတန် USB-C-to-Lightning Cable ကို ထပ်မံ ၀ယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပို ထပ်ကုန်မယ့် ၇၅ ဒေါ်လာဟာ ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ iPhone X ရဲ့ ဘက်ထရီအားကို ၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထားရှိထားပြီး USB-C-to-Lightning Cable နဲ့ 29-watt Power Adapter တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ နံရံကပ် အားသွင်းပေါက်ကနေ အားသွင်းခြင်းကို စမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။ အားသွင်းနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း iPhone X ကို အားသွင်းပြီး ၁၅ မိနစ်နဲ့ ၃၀ […]
37. ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးပေးချင်တဲ့ Android App များ	-DigitalTimes
#FEATURES	(12h ago)
ဖွင့်ရန်။ Smartphone App များဟာ ဖုန်းပြောဖို့ သာမဟုတ်ဘဲ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို တိုင်းတာပေးတဲ့ Google Fit Fitness Tracking ၊ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ Ebook Reader တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Amazon Kindle Lite နဲ့ အမေဇုန်ရဲ့ Web Browser အသစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Internet by Amazon တို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Amazon Kindle Lite Amazon Kindle Lite ဟာ နာမည်ကျော် Amazon Kindle App ရဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖိုင်အရွယ်အစားက 2MB […]
36. ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ၏ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို “ဒေတာအသုံးပြုခ နှင့် စာရင်းသွင်းရယူခပေးရန်မလိုဘဲ” My Ooredoo App ကနေ ကြည့်ရှုခွင့်ရမည်	-DigitalTimes
#Local	(13h ago)
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံး 4G Plus ကွန်ရက်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းကို ဦးဆောင်နေသော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် အူရီဒူးမြန်မာသည် ယနေ့တွင် ၎င်း၏ ၀န်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများအတွက် ပျော်ရွှင်မှုများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများကို ယူဆောင်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ အူရီဒူး၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ရက် (တနင်္ဂနွေ)နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၈ ၏ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို စာရင်းသွင်းခ နှင့် ဒေတာအသုံးပြုခ ပေးရန်မလိုဘဲ My Ooredoo App မှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူခွင့်ရရှိတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၈သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အရေးကြီးသော အားကစားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ဘောလုံးအားကစားကို နှစ်သက်ခုံမင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူခွင့် ရရှိရန်အတွက် အူရီဒူးမြန်မာအနေဖြင့် ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ […]
35. တောင်ကိုရီးယားက ကားသုံးဖို့ မလိုတဲ့ ဒေါ်လာ ၄၀ ဘီလီယမ်တန် မြို့တော်ကို တည်ဆောက်နေ	-DigitalTimes
#NEWS	(14h ago)
ဖွင့်ရန်။ ဒီနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်လို အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာများကြောင့် တောင်ကိုရီးယားကို လူတိုင်း နီးပါး သိကြပါတယ်။ သူဟာ နည်းပညာ အပိုင်းမှာ ကမ္ဘာကို ယှဉ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ဆောင်ဒိုမှ International Business District (IBD) မှာ ကားစီးဖို့ မလိုတဲ့ မြို့တော်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေပါတယ်။ အဲဒီ စီမံကိန်းကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ စတင် ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အပြီးတည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၄၀ ဘီလီယမ် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနေအိမ်များကနေ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ပန်းခြံများ၊ ရုံးခန်းများ ဈေးဝယ်စင်တာများ အားလုံးကို လမ်းလျှောက်သွားလို့ရအောင် တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ သဘာဝ […]
34. Moto E5 Play Android Go Edition ကို ကြေညာ	-DigitalTimes
#Android	(18h ago)
ဖွင့်ရန်။ Moto E5 Play ဟာ တန်ဖိုးနည်း Moto E5 ထက် အနည်းငယ် ပိုပြီး ဈေးသက်သာတဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Motorola က Moto E5 Play Android Go Edition ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Android Go Edition ဖြစ်တဲ့အတွက် Stock Android Oreo Go ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ စွမ်းရည်နိမ့် ဟာ့ဒ်ဝဲများမှာ လျှင်မြန်သွက်လက်စွာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ E5 Play နဲ့ ယှဉ် ရင် Android Go Edition စာ အရွယ် အနည်းငယ်ပိုကြီးပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရည်အသွေး ၊ ဘက်ထရီနဲ့ RAM တို့ကို […]
33. ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးပေးချင်တဲ့ AXE.IO (Android Game)	-DigitalTimes
#FEATURES	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ AXE.IO ဟာ Online Multiplayer Game အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ ဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ နဂါးများကိုလည်း သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းရမှာပါ။ ရန်သူများနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် ပုဆိန်ကို ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင် ၁၆ ကောင်ထဲမှ သင်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်ကို ထိန်းချုပ်ရတဲ့ ခလုတ်များကလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ဘယ်ဘက် လက်မကို Joystick လို အသုံးပြုပြီး ဇာတ်ကောင်ကို လှုပ်ရှားသွားလာခိုင်းရမှာပါ။ အစိမ်းရောင်မျှားကို ရန်သူများအား ချိန်ရွယ်ပြီး ပုဆိန်နဲ့ ပစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဆိန်တစ်ချောင်းကို ပစ်ပြီးရင်တော့ နောက်ထပ် ပုဆိန်ကို လိုက်ရှာပြီး တိုက်ခိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဆိန်ကို ကောက်ယူဖို့အတွက် ပုဆိန်အပေါ်ကို ပြေးသွားရုံပါပဲ။ ရန်သူများ သင့်ကို ပစ်လိုက်တဲ့ ပုဆိန်များကိုလည်း […]
32. Android မှာ Google Assistant ကို ပိတ်နည်း	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ Google ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိုယ်ရေးလက်ထောက်ဟာ Android Device တိုင်းလိုလိုမှာ ရှိနေပါပြီ။ “ Ok, Google “ လို့ ပြောပြီး သူ့ကို ဆင့်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် Home Button ကို ဖိထားရင် သူရောက်လာမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ အသံအမိန့်များဖြင့် သူ့ကို အလုပ်များ လုပ်ခိုင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများ မေးခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို မြန်မာလိုပြောပြီးတော့ ခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ သူဟာ နောက်ကွယ်မှာ Run နေတဲ့အတွက် ဖုန်းကို လေးလံစေပါတယ်။ သူ့ကို မသုံးရင်တော့ ပိတ်ထားဖို့ အကြံ ပေးပါတယ်။ Home Button ကိုဖိထားပြီး Google Assistant ကို ဖွင့်ပါ။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ ခလုတ်ကို […]
31. LG က ၆.၁ လက်မ iPhone အတွက် LCD Display ထုတ်ပေးမည်	-DigitalTimes
#Apple	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ တောင်ကိုရီးယား မီဒီယာတစ်ခုက LG ဟာ ၆.၁ လက်မ အိုင်ဖုန်း အတွက်သာ LCD Display များ ထုတ်လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းဟာ အိုင်ဖုန်း သုံးလုံးထဲမှာ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း LCD Display ပေါင်း သန်း ၂၀ ထုတ်လုပ်ပေးမှာပါ။ ယခင်ကတော့ LG ဟာ Apple iPhone X Plus အတွက် OLED Display များကို ထုတ်လုပ်ပေးမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Apple ဟာ LG အား သူ့ရဲ့ အိုင်ဖုန်းများအတွက် OLED Screen ဒုတိယအများဆုံး ထောက်ပံ့သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အစောပိုင်းမှာ စကရင် ၂ သန်းနဲ့ ၄ […]
30. 2017 MacBook Pro vs. 2018 MacBook Pro	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] ဇူလိုင်လ ၁၂ရက်နေ့ကပဲ Apple ကနေ Touch Bar ပါတဲ့ 13-inch နဲ့ 15-inch MacBook Pro တွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အခုဆို အွန်လိုင်းစတိုးတွေကနေ မှာယူလို့ရနေပါပြီ။ အခုထွက်လာတဲ့ 2018 MacBook Pro တွေက မနှစ်က 2017 MacBook Pro တွေနဲ့ ဘာကွာလဲ ဘာတွေကောင်းလာလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်.. 2018 MacBook Pro တွေမှာ 8th-Generation Intel Core Processor တွေသုံးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် 15-inch မော်ဒယ်တွေက မနှစ်ကထက် ၇၀% လောက်ပိုမြန်လာပြီး 13-inch မော်ဒယ်လ်တွေကတော့ မနှစ်က 7th-Generation Intel Core Processor တွေထက် ၂ဆတောင်ပိုမြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ (Benchmark score တွေအရပေါ့) မနှစ်က 15-inch မော်ဒယ်လ်မှာတော့ clock-speed 3.1 GHz ရှိတဲ့ quad-core Core […]
29. Notch နဲ့ အနောက်ကင်မရာ ၂ လုံးပါတဲ့ Oppo A3s	-DigitalTimes
#Android	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ Oppo က အိန္ဒိယမှာ တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်း အသစ်တစ်လုံးကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ အမည်မှာ A3s ဖြစ်ပြီး Oppo A5 ကို မွမ်းမံထားတဲ့ ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Oppo A3s မှာ ၆.၂ လက်မ IPS Display ထည့်သွင်းထားပြီး 720x1520p Resoluton ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အချိုးမှာ ရှည်လျားတဲ့ 19:9 ဖြစ်ပါတယ်။ Oppo က FullView Display လို့ ခေါ်ပြီး Screen-to-Body Ratio မှာ ၈၈.၈ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Qualcomm Snapdragon 450 SoC ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 2GB RAM , 16GB […]
28. စမတ် Function တွေနဲ့အတူ ဈေးသက်သာလွန်းတဲ့ Xiaomi Mijia Quartz Watch	-DigitalTimes
#NEWS	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Xiaomi ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Mijia brand ကတော့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်လေးတိုးလာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ သူကိုတော့ Mijia Quartz Watch လို့ခေါ်ပြီး ပုံမှန်နာရီဒီဇိုင်းပုံကိုမှ စမတ် Function တစ်ချို့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ hybrid နာရီလေးတစ်လုံးပါ။ ပုံမှန်သုံးနေကျနာရီတွေကိုမှ Smart Feature လေးတွေ နည်းနည်းလေးပိုလာတာမျိုးကို ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နာရီအိုးအချင်းကလည်း 40mm ပဲရှိပြီး ပုံမှန်လက်ပတ်နာရီတွေလို လတ်ပတ်ကြိုး၂ဖက်ပါပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကတော့ တော်တော်လေးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မိုက်နေတာပါပဲ။ သွားခဲ့သမျှခြေလှမ်းတွေကိုမှတ်နိုင်ဖို့ Pedometer ပါတဲ့အတွက် တစ်နေ့ခြေဘယ်နှစ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ စံတော်ချိန်တွေအလိုက် အချိန်ကိုအလိုအလျောက်ညှိပေးနိုင်ပြီး Call notification တွေ Alarm တွေလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ သူကတော့ Display ကနေတိုက်ရိုက် Set up လုပ်လို့မရတဲ့အတွက် စမတ်ဖုန်း App တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှ Alarm […]
27. Apple က MacBook Pro Model အသစ်များကို ကြေညာ	-DigitalTimes
#Apple	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ Apple က တန်ဖိုြး့ကီး MacBook Pro အသစ်များကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ၁၃ နဲ့ ၁၅ လက်မ လက်ပ်တော့များ ဖြစ်ပြီး Touch Bars ပါရှိပါတယ်။ Specs များ တိုးတက်လာပေမယ့် ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာများတော့ မပါပါဘူး။ ၁၅ လက်မ မော်ဒယ်မှာ6Core 8th Gen Intel Core Processors များထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ၁၃ လက်မ မော်ဒယ်မှာ Quad-Core Processor ပါပါတယ်။ သူတို့မှာ 32GB RAM , 4TB SSD များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ၁၃ လက်မမော်ဒယ်ရဲ့ တန်ဖိုးအနည်းဆုံးမော်ဒယ်ဟာ ၁၇၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ ၁၅ လက်မရဲ့ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး […]
26. ၂၀၁၈ မှာအကြိုက်မိဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Rampage (2018)	-DigitalTimes
#Life Style	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] ဒီတစ်ပတ် TGIF အတွက်ကတော့ တော်တော်များများလည်း ကြည့်ပြီးလောက်ကြပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားအကြောင်းပါ။ နာမည်လေးကတော့ Rampage ပါတဲ့။ ဒီကားလေးကတော့ ၂၀၁၈ ထွက် သိပ္ပံ+Monster ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Midway Games ရဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းစီးရီး Rampage ကိုပဲအခြေခံပြီး ဒါရိုက်တာ Brad Peyton ကရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဇာတ်ကားရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကတော့ အာကာသမှာစမ်းသပ်ထားတဲ့ စမ်းသပ်ခန်းပျက်စီးသွားတာကနေ မျိုးစိတ်တွေပါတဲ့ Pathogen container တွေက အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုကျခဲ့တာက စပါတယ်။ Dwayne Johnson (The Rock ကြီး) က George လို့ခေါ်တဲ့ လူဝံလေးကို ကယ်ပြီး စောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့ လက်ဟန်ခြေဟန်အချက်ပြဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်ရင်း ရင်းနှီးလာခဲ့ကြပါတယ်။ George လိုပဲ တောထဲမှာ ဝံပုလွေ၊ မြစ်ထဲမှာမိကျောင်းမျိုးစိတ်တစ်ခုစီလည်း ကျသွားခဲ့တာပါ။ တစ်ည မျိုးစိတ်ပြောင်းစေတဲ့ sample […]
25. Huawei ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းတဲ့ နည်းပညာဟာ အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာမည်	-DigitalTimes
#Android	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဘက်ထရီများဟာ အဆုံးစွန်ဆုံး အရွယ်အစား အထိရောက်နေပါပြီ။ ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီများကို ထည့်သွင်းပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူများဟာ လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာများကို ငွေကြေး ကုန်ကျခံပြီး ဖန်တီးနေကြပါတယ်။ Oppo မကြာခင်က ကြေညာခဲ့တဲ့ Find X Lamborgini Edition မှာ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Super VOOC Charging Standard ဟာ လက်ရှိမှာတော့ အလျှင်မြန်ဆုံး အားသွင်း စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာက ၃၅ မိနစ်အတွင်းမှာ 3750mAh Battery ကို အားအပြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Oppo ရဲ့ နည်းပညာကို ဟွာဝေးရဲ့ နည်းပညာက အနိုင်ယူတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွာဝေးရဲ့ […]
24. Xiaomi Mi A2 ကို ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်မည်	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ သတင်းများအရ Xiaomi က Mi A2 ကို ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Specs အပိုင်းမှာ Mi 6X နဲ့ Mi A2 ရဲ့ တစ်ခုထဲသော ကွာခြားချက်မှာ OS ဖြစ်ပါတယ်။ Mi A2 မှာ MIUI မပါဘဲ Stock Android ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Mi A2 မှာ ၅.၉၉ လက်မ Full HD+ Display တပ်ဆင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Qualcomm Snapdragon 660 Chipset မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 12+20MP Dual Camera များ ပါပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ 20MP […]
23. သင့်ဖုန်းမှ ခလုတ်များ မတော်တဆ ထိမိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးမယ့် Touch Lock –Touch Block	-DigitalTimes
#Android	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ Touch Lock ဟာ သင့်ဖုန်းမှ ခလုတ်များနဲ့ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို မတော်တဆထိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင်လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ App ကနေ ထွက်သွားခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ သူက Lock လုပ်ထားစဉ်မှာ စကရင်ကို ဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်လည်း ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုများ ကြည့်ရှုဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းပြောနေစဉ်မှာလည်း ခလုတ်များထိမိခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်သွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကလေးငယ်များ သင့်ဖုန်းကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း ဂိမ်းကလွဲပြီး အခြား အရာများကို အသုံးပြုခြင်း မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဟင်းချက်နေစဉ် ဖုန်းမှာ ဟင်းချက်နည်းကို ကြည့်ရှုနေတဲ့ အခါမှာလည်း စကရင် ပိတ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စကရင်ကို ရေလှိုင်းပုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အတွက် ရေစိုခံဖုန်းများဖြင့် ရေအောက်ထဲမှာ ဗီဒီယိုများကို ကောင်းစွာ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ မြေပုံကြည့်ပြီး […]
22. Mercedes-Benz ရဲ့ မောင်းသူမဲ့ တက္ကစီကားများ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စမ်းသပ်မည်	-DigitalTimes
#Automobiles	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ Mercedes-Benz ရဲ့ မိခင် ကုမ္ပဏီ Daimler နဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်း ထောက်ပံ့သူ Bosch တို့ဟာ လာမယ့်နှစ် ဒုတိယ နှစ်ဝက်ကစပြီး San Francisco Bay Area မှာ မောင်းသူမဲ့ တက္ကစီကားများကို စမ်းသပ်မှာပါ။ ကားများကို အများပြည်သူ အခမဲ့ စီးနင်းနိုင်ပြီး Ride Sharing ၀န်ဆောင်မှု ပါပါတယ်။ အဲဒီကားများမှာ Nvidia ရဲ့ မောင်းသူမဲ့ ကားနည်းပညာကို အသုံးပြုထားမှာ ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းများမှာ မောင်းနှင်မှာပါ။ တည်နေရာ အတိအကျနဲ့ စမ်းသပ်မယ့် ကာလ အပိုင်းအခြားကို မပြောကြားသေးပါဘူး။ Daimler က Mercedes S-Class Car သို့မဟုတ် V-Class Vans များကို အသုံးပြုဖို့ […]
21. ဇူလိုင်လ ၁၉ရက်နေ့မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်လာတော့မယ့် Xiaomi Mi Max 3	-DigitalTimes
#Mobiles & Tablets	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Xiaomi ရဲ့ Screen ဆိုဒ်ကြီးကြီးနဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးထွက်ဖို့အချိန်တော့ ရောက်လာပြီထင်ပါတယ်။ Xiaomi က သူ့ရဲ့ Mi Max3ဖုန်းတွေကို လာမယ့် ဇူလိုင်၁၉ မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်း မနေ့ကပဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှ စမိတ်ဆက်မှာဆိုတော့ ရောင်းဖို့ကတော့ နည်းနည်းစောင့်ရပါဦးမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ Memory နဲ့ သုံးတဲ့ Chipset ကိုလိုက်ပြီး ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ ပုံမှန်မော်ဒယ်လ်ကတော့ Clock-speed 1.8GHz octa-core Snapdragon 636 Processor ကိုသုံးထားပြီးတော့ Pro ဗားရှင်းကတော့ ပိုမြင့်တဲ့ Snapdragon 710 Processor ကိုသုံးထားမယ့်ပုံပါ။ Xiaomi Mi Max3Pro ကတော့ RAM 6GB, internal memory 128GB […]
20. စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခုန်တက်သွားစေမယ့် Huawei ရဲ့ GPU Turbo နည်းပညာဆိုတာ??	-DigitalTimes
#FEATURES	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Honor ရဲ့ GPU Turbo နည်းပညာက ကုမ္ပဏီကထုတ်ခဲ့သမျှဟန်းဆက်တော်တော်များများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ရော ဘက်ထရီသက်တမ်းပါ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ အခုဒီနည်းပညာကို high-end စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Honor 10, ပြီးရင်တော့ Honor Play, View 10, Honor9Lite နဲ့ Honor 7X တို့မှာပါ သုံးလာပါတော့မယ်။ AI နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Dual-camera၊ ဖန်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနဲ့ စွမ်းရည်မြင့် Kirin 970 Processor တွေကိုတော့ Huawei P20 Pro မှာကတည်းက တွေ့ပြီးသားဖြစ်လို့ ဒီတစ်ခေါက် Honor 10 မှာ GPU Turbo နည်းပညာနဲ့ အမြင့်စား Chipset ကိုသာသုံးလိုက်ရင် အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေထဲက တစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ Honor […]
19. ပုံတွေမှာပါတဲ့ Noise တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးမယ့် Nvidia ရဲ့ AI နည်းပညာသစ်	-DigitalTimes
#Tech Update	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] NVIDIA သုတေသီတွေကတော့ နောက်ထပ်ဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်နည်းပညာသစ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ သူ့ရဲ့တီထွင်မှုအသစ်ကတော့ ပုံတွေမှာပါတဲ့ Noise တွေ ရေစာ (watermark) တွေကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Artificial Intelligence (သိဉာဏ်တုနည်းပညာ)နဲ့မြှင့်တင်ထားတာဖြစ်လို့ လက်ရှိ Noise လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ tools တွေထက် ပိုထိရောက်တဲ့နည်းပညာပါ။ အခုခေတ် ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ sensor တွေနဲ့ရိုက်လို့ ပါလာတဲ့ Noise တွေက ဟိုးအရင်ချိန်တွေကလောက်မဆိုးတော့ပေမယ့် အထူးသဖြင့် စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေကတော့ အလင်းရောင်အားနည်းတဲ့ Low-Light အခြေအနေတွေမှာရိုက်ရင် Noise တွေများနေဆဲပါပဲ။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေရဲ့ Sensor ဆိုဒ်က သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Low-Light မှာပုံကောင်းကောင်းမရိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ရိုက်ပြီးမှပုံတွေကို အရည်အသွေးကောင်းအောင်ပြန်ပြင်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေ ဥပမာ နောက်ဆုံးထွက် iPhone တို့ Pixel တို့ဆိုရင်တော့ Low-light မှာရိုက်တဲ့အခါ Noise […]
18. Camera ၄ လုံးပါတဲ့ Huawei Nova 3	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ Huawei က ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့မှာ Nova3ကို တရားဝင် ကြေညာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို VMall မှာ ကြိုတင်မှာယူဖို့ စာရင်းတင်ထားပါတယ်။ သူ့မှာ Kirin 970 Chipset, 6GB RAM , Tall Screen နဲ့ ကင်မရာ လေးလုံး ပါပါတယ်။ Chipset ဟာ Octa-Core ဖြစ်ပါတယ်။ 6GB RAM + 128GB Storage များပါပါတယ်။ Huawei ရဲ့ Super Charge ပါတဲ့ 3750mAh Battery ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ သူဟာ ဒီဇိုင်းအပိုင်းမှာ P20 Lite နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာပြင်က […]
17. 23MP Rear Camera , 6” 18:9 Screen များပါတဲ့ Sony Xperia XA2 Plus	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ Sony Xperia XA2 နဲ့ XA2 Ultra တို့ကို ဇန်န၀ါရီလမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ စွမ်းရည်သင့် Xperia XA2 Plus ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ XA2 မှာလို 23MP MotionEye Camera နဲ့ Snapdragon 630 Chipset များ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ မျက်နှာပြင် အရှည်နဲ့ ပါးလွှာတဲ့ မျက်နှာပြင် ဘေးဘောင်များကြောင့် ဒီဇိုင်းက ပိုမို စွဲဆောင်မှု ရှိလာပါတယ်။ သူဟာ XA2 Series များထဲမှာ 18:9 Screen ပါတဲ့ ပထမဆုံး ဖုန်းပါ။ ၆ လက်မ Full HD+ LCD Display ကို […]
16. သင့် ဒေတာတွေ အခိုးမခံရဖို့ ကာကွယ်ပေးမယ့် Firefox Focus : The Privacy Browser	-DigitalTimes
#FEATURES	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ Firefox ဘရောက်စာကို ဒတ်စတော့နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြား ဘရောက်စာ အမျိုးအစားတစ်ခုကိုလည်း Firefox က ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အသုံးပြုသူများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာများကို လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ Firefox Focus : The Privacy Browser ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၀က်ဆိုက်များမှာ သင့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို ခြေရာခံနေတဲ့ အရာများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သူက ၀က်ဆိုက်များမှ ကြော်ညာများကိုလည်း ဖျောက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ၀က်ဆိုက်များ ကြည့်ရှုရာမှာ လျှင်မြန်သလို ဒေတာ ကုန်ကျမှု သက်သာစေပါတယ်။ ၀က်ဆိုက်များ ကြည့်ရှုပြီးတာနဲ့ သူက History , Cookies, Passwords များကို ဖျက်ဆီးပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့် စမတ်ဖုန်းကို အခြားလူများ […]
15. Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ အလွန်တူတဲ့ Note9ရဲ့ ဓါတ်ပုံထွက်ပေါ်လာ	-DigitalTimes
#Android	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဆမ်ဆောင်းက သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ Note9ကို မိတ်ဆက်တော့မှာပါ။ အခုတော့ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံများ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သူဟာ Note 8 နဲ့ အလွန် တူပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ Android Headlines က ဓါတ်ပုံများဟာ ဆမ်ဆောင်းထံမှပုံများ ဖြစ်ပြီး ယုံကြည်ရတဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုက ရထားတာလို့ ပြောပါတယ်။ ဓါတ်ပုံအရ ခေတ်စားနေတဲ့ Notch မပါဘဲ စကရင်ရဲ့ အထက်မှ ဘောင်မှာ ကင်မရာ၊ Iris Scanner နဲ့ အခြား ဆန်ဆာများကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းက Galaxy Note9မှာ Bixby Version 2.0 ပါမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ ဗားရှင်းအသစ်ဟာ […]
14. AI နဲ့ Personal Assistant တွေက လူတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုလွယ်ကူလာစေသလဲ?	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] ချမ်းသာလွန်းတဲ့သူတွေ နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးလက်ထောက်တစ်ယောက် (Secretary တစ်ယောက်) ဆိုတာ သွားလေရာအရိပ်လိုလိုက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေဖတ်ပေး၊ ခရီးသွားဖို့စီစဉ်ပေး၊ အလိုက်ဖက်ဆုံးအဝတ်အစားတွေရွေးချယ်ပေးပြီး တစ်နေ့တာလုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်မှန်သမျှကို ပြောပြပေးရတဲ့သူတွေပါ။ (Secretary Kim လိုပေါ့  ) အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဆယ်လီတွေ ချမ်းသာတဲ့သူတွေမဟုတ်တောင် ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်တစ်ယောက်ထားလို့ရနိုင်နေပါပြီ။ သူတို့ကတော့ လူတစ်ယောက်လို ပြီးပြည့်စုံအောင်တော့မလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် လူကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးနီးပါးလောက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေပါပဲ။ တစ်နေ့တာအတွက် လူတိုင်းနီးပါးအတွက် လက်ထောက်တစ်ယောက်လို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တာ နည်းပညာတွေပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီနည်းပညာတွေကြောင့် တစ်နေ့တာဘဝတွေမှာ ဘယ်လိုလွယ်ကူလာသလဲ? – ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေမှာ AI တွေရဲ့အားသာမှု ဥပမာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အချိန်အပိုထွက်လာအောင် Chat Bot သုံးလိုက်တာတွေကစလို့ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့အစည်းအဝေအချိန်ဇယားချတာတွေအထိ AI နဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အတွက် လူတွေအနေနဲ့က ဖန်တီးမှုတွေ စိတ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်ပဲ အချိန်ကုန်ရုံပါပဲ။ – ကုမ္ပဏီတွေမှာဆို ဒေတာစုဆောင်းတာတွေ […]
13. GeekBench စာရင်းမှာ Specs တွေပေါ်လာခဲ့တဲ့ ZTE nubia Z18	-DigitalTimes
#Mobiles & Tablets	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] ZTE ကနေထွက်လာဖို့ရှိတဲ့ Nubia ဖုန်းလေး၂လုံးအကြောင်း သတင်းတွေလည်းကြားရစပြုနေပါပြီ။ ပုံမှန် nubia Z18 စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ နောက်ထပ် Z18s ဖုန်းကတော့ Notch မပါတဲ့ Display နဲ့ ကျောဘက်မှာ နောက်ထပ် Screen တစ်ခုပါလာမယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း Geekbench စာရင်းမှာ မော်ဒယ်လ်နံပါတ် NX606J ဆိုတဲ့ Nubia ဖုန်းလေးတစ်လုံးရဲ့ ရမှတ်တွေတက်လာပါပြီ။ ပုံမှန်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ nubia Z18 ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ သူကတော့ Qualcomm Snapdragon 845 chipset ကိုသုံးထားပြီး RAM 6GB, Android 8.1 Oreo နဲ့ပွဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေတုန်းကတော့ 5.99-inch Full HD+ display နဲ့ Storage ကလည်း […]
12. ကမ္ဘာ့ဖလား ၂ဝ၁၈ ပရိသတ်များအတွက် Russia Roaming Packs များကို အူရီဒူးမှမိတ်ဆက်	-DigitalTimes
#Ooredoo	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] \_အူရီဒူးမြန်မာမှ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ပျော်ရွင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ရန် ယနေ့တွင် အူရီဒူးသုံးစွဲသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် “Roam2Russia” ကို ရုရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်၍ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်များ ကို ပျော်ရွှင်နှစ်ခြိုက်စွာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရန်၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ကိစ္စသွားရောက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ယခုစတင်မှုနှင့်အတူ Ooredoo Roaming Passport အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် နိုင်ငံအရေအတွက်မှာ ၄ နိုင်ငံသို့ တိုးမြှင့်သွားပြီဖြစ်သည်။ Roam2Russia roaming အစီအစဉ်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်များမှာ (၇) ရက် သက်တမ်းရှိပြီး ရရှိသည့် ခံစားခွင့်ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်၍ ၁၅,ဝဝဝ ကျပ်တန် အစီအစဉ်နှင့် ၂၅,၀၀၀ ကျပ်တန် အစီအစဉ်ဟူ၍ မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်များတွင်ပါရှိသည့် ကမ်းလှမ်းချက်များမှာ သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာအသုံးပြုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ ရုရှားနိုင်ငံအတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အဝင်ဖုန်းများလက်ခံခြင်းနှင့် SMS […]
11. Facebook က News Feed မှာ AR Ads များကို စမ်းသပ်နေ	-DigitalTimes
#Facebook	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ Facebook က Virtual Fitting Room လို စွမ်းရည်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ စမ်းသပ်နေပါတယ်။ Virtual Fitting Room ဆိုတာက Facebook မှာ မျက်မှန်ကြော်ညာ တစ်ခုကို တွေ့တဲ့ အခါ အဲဒီ မျက်မှန်ကို သင် ၀တ်ဆင်လိုက်ရင် ဘယ်လို ပုံသဏ္ဍာန် ရှိမလဲဆိုတာကို ပြသပေးပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Augmented Reality နည်းပညာကို သုံးထားတဲ့ ကြော်ညာများ ဖြစ်ပါတယ်။ AR Ads များဟာ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်မှာသာ ရှိပါသေးတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ အဲဒီကြော်ညာများကို မြင်နေရပါပြီ။ Facebook ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ AR Face Filter App ဖြစ်တဲ့ MSQRD ကို […]
10. Apple Store ကနေ ဒေါ်လာ ၂၇၀၀၀ ကျော်ဖိုး MacBook နဲ့ iPhone များ လုယူမှုဖြစ်ပွား	-DigitalTimes
#Apple	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ လူလေးဦးဟာ Apple Store ကနေ ဒေါ်လာ ၂၇၀၀၀ ကျော်ဖိုး MacBook နဲ့ iPhone များ လုယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ လုယူမှုဟာ စက္ကန့်ပိုင်းသာ ကြာခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ခေါင်းစွပ်ပါတဲ့ အင်္ကျီများကို ၀တ်ဆင်ထားကြပြီး ခေါင်းကို အုပ်ထားပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ဖရက်စနိုရှိ Fashion Fair Mall အတွင်းမှ Apple Store မှာ အခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ သူတို့ဟာ စတိုးမှ လက်တော့နဲ့ ဖုန်းများကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးများအား လျှင်မြန်စွာ ဖြုတ်ပြီးတာနဲ့ ပစ္စည်းများကို ကိုင်ကာ စတိုးထဲကနေ ပြေးထွက်သွားခဲ့တာပါ။ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်ဟာ စက္ကန့် ၆၀ ပဲ ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ လုံခြုံရေး ကင်မရာကနေ လုယူမှုကို […]
9. Microsoft က တန်ဖိုးနည်း Surface Go Tablet ကို ကြေညာ	-DigitalTimes
#HUBS	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က Surface Go အမည်ရ တန်ဖိုးနည်း တက်ဘလက် အသစ်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ၁၀ လက်မ 1800×1200 Display နဲ့ Windows 10 ၊ Kickstand များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ တန်ဖိုးအားဖြင့် ၃၉၉ ဒေါ်လာသာ ရှိပါတယ်။ ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လမှာ ရောင်းမှာပါ။ သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်းက အခြား Surface Device များနဲ့ တူညီပါတယ်။ Kickstand က တက်ဘလက်ကို ပုံစံအနေအထားများစွာနဲ့သုံးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့ကင်မရာမှာ မျက်နှာဖြင့် Login ၀င်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပါပါတယ်။ Surface Connector Port ကနေ အားသွင်းခြင်းနဲ့ ဒတ်စတော့ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ USB-C 3.1 […]
8. မေ့သွားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယ်လို ကျော်မလဲ ?	-DigitalTimes
#Android	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ Android Device ကို PIN Code , Pattern များဖြင့် ကာကွယ်ထားသူများအတွက် မေ့သွားတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Lock Screen ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းများထဲက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း။ ။ Android Device Manager ( Android 2.3 နဲ့ သူ့အထက် ) အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ Android Device Manager ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ Google အကောင့် ထည့်ထားတာနဲ့ ဒီနည်းလမ်းက အလုပ်ဖြစ်ပါပြီ။ ကွန်ပြူတာကနေ Android Device Manager […]
7. မနက်ဖြန်မှာတွေ့ရတော့မယ့် Nokia X5 စမတ်ဖုန်း	-DigitalTimes
#Mobiles & Tablets	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Nokia X5 စမတ်ဖုန်းကတော့ မနက်ဖြန် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ TENAA ကနေ ပုံတွေ Specs တွေနဲ့ Bluetooth Certification တွေထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ အခု Baidu မှာ Press Render ပုံတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ X6 မှာတုန်းကလိုပဲ Nokia X5 မှာလည်း ကျောဘက် Dual-Camera နဲ့ ရှေ့ဘက်မှာ Notch ပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Notch ကတော့ iPhone X တို့ Xiaomi Mi 8 တို့လောက်ကို Notch အရွယ်ပိုကျယ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ( ပုံပါအတိုင်းဆိုရင်တော့ ) X6 နဲ့တော်တော်လေးကို ဆင်ပေမယ့် Nokia […]
6. Samsung Galaxy S10+ မှာ Dual Selfie Camera ပါမည်	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ ဆမ်ဆောင်းရဲ့ လာမယ့်နှစ်မှာ မိတ်ဆက်မယ့် Galaxy S10 နဲ့ S10+ ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ အခုကတည်းက ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ယခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းအရ Galaxy S10+ မှာ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံးနဲ့ အရှေ့ ကင်မရာ နှစ်လုံး ထည့်သွင်းထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံးကတော့ 12MP Wide+12MP Tele + 16MP Fixed-Focus 120 Degree Super Wide Angle Camera များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ Galaxy S Series များကို ၂ လုံး မဟုတ်ဘဲ ၃ လုံးတောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှာပါ။ Plus Version မှာ ၆.၄၄ လက်မ […]
5. Vivo Nex ကို ကမ္ဘာအ၀န်းမှာ ရောင်းပြီ	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ Pop-Up Selfie Camera နဲ့ Bezel-less Display ပါတဲ့ Vivo Nex ကို ရှန်ဟိုင်းမှာ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကို ကမ္ဘာအ၀န်းမှာ ရောင်းချပေးတော့မယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ရောင်းချမယ့် ငါး နိုင်ငံကတော့ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့ ဖြစ်ပြီး ယခုလကုန်မှာ ရောင်းချမှာပါ။ Vivo Nex ကိုမော်ဒယ်နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Vivo Nex S မှာ မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာနဲ့ Snapdragon 845 Chipset ပါပါတယ်။ Vivo Nex A မှာ သာမာန် လက်ဗွေရာ ကိရိယာနဲ့ Snapdragon […]
4. Facebook မှ Content များကို သိမ်းဆည်းနည်း သုံးနည်း	-DigitalTimes
#Facebook	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ Facebook မှ ပို့စ်၊ ဗီဒီယို၊ လင့်နဲ့ ဓါတ်ပုံများကို နောက်မှ ပြန်လည် ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ထာဝရသ်ိမ်းထားချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းဆည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ Facebook ကလည်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ထဲမှာပဲ Content များကို သိမ်းဆည်းနည်းကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်း သုံးခုထဲက သင်နှစ်သက်ရာကို အသုံးပြုနို်င်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Facebook ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။ Facebook က Save on Facebook လို့ ခေါ်တဲ့ Tool အသစ်ကို Desktop နဲ့ Mobile နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ စွမ်းဆောင်ချက်က Facebook မှ Content များကို အလွယ်ကူဆုံး သိမ်းဆည်းပေးနိုင်လို့ လူများစွာက နှစ်သက်ကြပါတယ်။ […]
3. 4320mAh ဘက်ထရီကြီးနဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ Oppo A5	-DigitalTimes
#Oppo	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Oppo A5 ကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Oppo A5 ဟာ Dual rear Camera Setup, Artificial Intelligence (AI) powered Selfie Camera, Notch Display နဲ့ ဘက်ထရီ 4320mAh ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးအဖြစ် ပွဲထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆.၂ လက်မ မျက်နှာပြင် အကျယ်ရှိ HD Display ကို အသုံးပြုထားပြီး Resolution ကတော့ 720 x 1520 pixels ရှိပါမယ်။ Processor အပိုင်းမှာတော့ 1.8GHz ရှိတဲ့ Qualcomm Snapdragon 450 SoC ကိုအသုံးပြုထားပြီး Adreno […]
2. အမေရိကန်မှာ iPhone/ iPad ကိုင်နိုင်မှ လူချမ်းသာလို့ မြင်ကြကြောင်း စစ်တမ်းက ဖော်ပြ	-DigitalTimes
#Apple	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်မှာ iPhone/ iPad ကိုင်တာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ၀င်ငွေကောင်းလား၊ မကောင်းဘူးလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ချီကာဂို တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေး ပညာရှင် Marianne Bertrand နဲ့ Emir Kamenica တို့ရဲ့ သုတေသန စစ်တမ်းအရ သိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ ကျွန်တော်တို့ နှစ်များစွာကြာ ကောက်ယူထားတဲ့ ဒေတာများအရ အခြား ဘရန်းများကို ကိုင်ရင် ၀င်ငွေကောင်းတယ်လို့ လူတွေက မထင်ကြပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အိုင်ဖုန်း ကိုင်မှသာ ၀င်ငွေ ကောင်းသူ အဖြစ် မြင်ကြတာပါ။ “ လို့ ပညာရှင်များက စစ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အိုင်ဖုန်း ကိုင်မှ လူချမ်းသာလို့ ထင်လာကြတာ မကြာသေးပါဘူး။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကအထိ […]
1. Fans များက Surface Phone ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ Microsoft အား ဆန္ဒပြနေ	-DigitalTimes
#HUBS	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ Microsoft ရဲ့ Windows Phone များဟာ စမတ်ဖုန်း နယ်ပယ်မှာ မအောင်ခဲ့ဘဲ အကြီးကြီး ကျရှုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုမ္ပဏီက ၀င်းဒိုးဖုန်းများကို တစ်ခန်းရပ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ Surface Tablet / Laptop များဟာ အလွန် အောင်မြင်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုမ္ပဏီဟာ Surface Phone ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ့် သတင်းများ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းတွေ ထွက်နေတာ နှစ်များစွာတောင် ကြာနေပါပြီ။ အခုထက်ထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း မရှိသေးတဲ့အတွက် Fans များက Surface Phone ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ Microsoft အား ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဖန်များက အွန်လိုင်းမှာ လက်မှတ်များ လိုက်လံ ကောက်ခံနေပါတယ်။ လက်မှတ်ထိုးပွဲကို စတင်ခဲ့သူ Zachary […]